wikiHow:Somali Language Project/Macluumaad Ku Saabsan wikiHow - wikiHow
wikiHow:Somali Language Project/Macluumaad Ku Saabsan wikiHow
EditSababta Aan Halakan Ku Sugannahay
Waxaad malaha galisaa adduun uu qof walba si fudud u baran karo sida wax walba loo sameeyo. Adduunkaas helitaanka awaamir kooban oo tillaabo-tillaabo ah oo luuqado badan ku qoran u suurtageliso balaayiin qof inay noloshooda hor mariyaan, si caadi ah iyo si aan caadi ahaynba. Kaasi waa adduunka aan rabno inaan sameyno.
Halakan wikiHow, mujatamaca mutadawiciinta aqoonta ayaa isu tagay si ay adduunkaas u sameeyaan. Waxaa nariixaya jacaylka aannu wadaagno si aan u sameyno urur tayo sare leh oo ah hagayaasha 'sida-loo' ah. Waxaannu mar walba qoraal kasta sii hormarinnaa ilaa aan is dhahno wuxuu noqday ururka awaamirta tillaabo-tillaabo ah ee ugu saacidaadda badan ee meel walba laga heli karo oo mawduucaas ku saabsan.
Inkastoo aan ogsoonnahay in yoolkaas uu sanado badan qaadan doono si uu uhirgalo, waxaan ku raaxeysanaynaa ogsoonaanta aan leennahay inaan maalin waliba malaayiin qofood caawinno.
wikiHow waa dadaal wadareed si loo sameyn lahaa hagayaasha 'sida-loo' ee ugu saacidaadda badan adduunka. Sida Wikipedia, wikiHow waa wiki, waayo qof waliba bog ayuu qori karaa wuuna tifaftiri karaa. Kumanaan qofood oo caalamka ku kala nool ayaa si wadareed u qoray 193,207 qoraallo 'sida-loo'. 40 milyan oo qof ayaa bil walba wikiHow akhrista sida Google Analytics laga soo xiganayo, Quantcast-na waxay naga dhigtay nambarka 150aad bogagga ugu caansan.
Hadda waxaanu dhiseynaa qaababka 10 luuqadood oo ay ka mid yihiin Ingiriis, Isbaanish, Jarmal, Faransiis, Hindi, Talyaani, Holandi, Burtuqiis, Ruush iyo Shiine. Waxaan rajeyneynaa inaannu ugu dambayntii billaabi doonno wikiHow-ga luuqado badan oo kale.
Mujatamac mutadawiciin firfircoon oo qorayaal iyo tifaftirayaal ah oo kasoo jeeda wadammo badan ayaa sameeya bogga wikiHow-ga. Qof walboo wax ku darsada wikiHow-ga wuxuu u sameeyaa si maaweelo ah; sababaha kale ay dadku wax ugu darsadaan waxaa ka mid ah: jacaylka inaad dad kale caawisid, farxadda ay leedahay inaad ka qayb qaadatid hawl uusan qof kaligiis ku guuleysan karin, raaxada ay leedahay inay dad badan akhristaan waxaad qortay, iyo himilada inaad heshid xirfadaha caalamiga ah sida qoridda iyo hoggaaminta.
Aasaasaha wikiHow, Jaak Herik iyo shaqaalo tira yar oo mushaar qaata ayaa u suurta geliya inuu wikiHow hore u socdo.Xarunteennu waxay ku taallaa guri, haa waa guri, oo ku yaalla Palo Alto, Kalifornia.
EditSiduu wikiHow-ga U Shaqeeyo
Walxaha wikiHow-ga ku jira maalin walba way is baddalaan, waayo qof kasta ayaa wax ka beddeli kara, Tifaftir kasta waxaa laga arki karaa liiskeenna Beddeliddii Ugu Dambeysay, oo mar walba lala socdo. Mutadawiciin la socda bedeliddii ugu dambeysay ayaa is dhakhsiya badan uga saara tifaftirka aan habbooneyn. Hagidda tayada ayaa sidoo kale xaqiijisa in qoraal walba uu sii fiicnaado, iyadoo dad badan ay khibradohooda iyo aqoontooda ku biiriyaan.
Awaamirteenna waxaan si lacag-la'aan ah ula qeybsannaa ururrada ama qofka raba inuu u isticmaalo qaab aan ahayn mid ganacsi ah, innagoo u mareyno habka laysinka Creative Commons. Sidoo kale waxaan si lacag-la'aan ah u qeybsannaa barnaamijyadeenna isha furan oo dhan.
Waxaan isu aragnaa urur isku jir ah, kambani faa'ido u shaqaysta ee ku howlan dhisidda khayr guud ee caalami ah si raacsan hiraalkeenna. Waxaan isku biilnaa dhaqaala ahaan soo bandhigidda xayeysiin khiyaari ah. Laakiin, uma aragno in xayeysiinta wajiga lagaa galiyo. Qof waliba waxaan siineynaa fursad uusan xayeysiin ku arkin hadduu is diiwaan geliyo si uu ugu biiro mujtamaceenna tifaftirayaasha.
Ma rabtaa inaad macluumaad dheeri ah sii baratid? Waxaad qaadataa Booqashada wikiHow-ga.
EditMacluumaad Dheeri Ah oo Ku Saabsan wikiHow
Sidaan dhaqaalo ahaan isu biilno
Barnaamijka isha furan ee wikiHow
Guulaha wikiHow iyo macluumaadka
Astaamo Lasoo Dejisan Karo ee wikiHow